माधव नेपाल पक्षलाई बाँस्कोटाको आग्रह : ‘अंश र बंश चाहिए घरमै बस, मुग्लान नपस:: Mero Desh
माधव नेपाल पक्षलाई बाँस्कोटाको आग्रह : ‘अंश र बंश चाहिए घरमै बस, मुग्लान नपस
Published on: २० चैत्र २०७७, शुक्रबार १९:३२
“काठमाडौं, २० चैत्र । नेकपा (एमाले) का प्रभाव शाली नेता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले माधव नेपाल पक्षलाई अंश र बंश चाहिए घरमै बस्न र मुग्लान नपस्न भन्दै व्यंग्य कसे का छन् । आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर””तर्फ उनले यस्तो लेखेका छन् ।
“नेता बाँस्कोटाले नेता नेपाल पक्षलाई व्यंग्य गर्दैै भनेका छन्–फेरि कोही कोही घाम छोडेर एमाले मेरै हो भनेर प्रमुख शहरहरुमा घर खोज्ने चटारो मा किन दौडिरा हुन ?उनले लेखेका छन–नेकपा राम्रो हो,सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर पुष्पकमल कम्रेडले एक महिना अघिसम्म सडक रन्काको कस्तोविधी झल्को आइराछ।
“फेरि कोही कोही घाम छोडेर एमाले मेरै हो भनेर प्रमुख शहरहरुमा घर खो’ज्ने चटा’रोमा किन दौडिरा हुन? अं’श र बंश चाहिए घरमै बस मुग्लान नपस छ।आठ दश महिना पछि कस्ले बास देला र?“
यो पनि,,आ’क्रा’मक शैलीमा प्रस्तुत् भएका ओलीको कार ‘वा’हीको सुचीमा योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ठ “काठमा -डौं २० चैत्र । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधा””नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो वि”रोधीलाइ एक पछि अर्को गर्दै कार””वाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । पार्टीको हितविपरित काम गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधन नेपाल ,भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महि नाको लागि पार्टी बाट निलम्बित गरिसकेका छन् ।
“निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत् भएका ओली को नजर मा अब योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट परेका छन् । यी दुई नेतालाई पनि चाँडै कार वाही गर्ने तयारीमा ओली लागि परेको स्रोतले जनाएको छ। अर्को का’रवा’हीको सुचीमा भीम आचार्य, वेदुराम भुसाल, र’घुजी पन्त, सोम प्रसाद पाण्डे, विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री लगायत नेपाल समुहका नेताहरु ओलीको सु’चीमा परेका छन् ।
“पानी नपरेर खेतबारीमा बाली सुक्दै जाँदा चि’न्तित छन् किसानमहोत्तरी, २० चैत स् होली ९फागु० पर्वको रमाइलो सकेका किसान खेत बारीमा बाली सुक्दै गएको देखेर बिल खबन्द परेका छन् । होली पर्व सकेर खेतीपाती हेर्न थाले का महोत्तरीका तरकारी खेती गर्ने किसान तरकारीका बोट र बेला ९’लहरा० सुक्दै गएको देखेर बि’लखबन्द परेका हुन् ।
“लामो समयसम्म पानी नपरेर सिँचाइका अन्य विकल्प नपाइएपछि धमाधम बोटमै तरकारी सुक्न थालेकाले किसानमा चिन्ता बढाएको हो । “खेत बारीमा भाण्टा, परवल, घिरौँला, झिमनी, रामतोरई, करेला, फर्सी र लौकासहितका तरकारीका बिरुवा पानीबेगर सुकिरहे का छन्, पानी पर्दैन, इनार धमाधम सुके अब के गराँै।
“रु” जिल्लाको भङगाहा नगरपालिका–४ का तरकारी किसान चन्देश्वर राय दनुवारले दनुवार ले वि””रक्तिँदै भन्नुभयो, “बारीमा लहलह बढ्नुपर्ने तरकारीका बिरुवा सुक्दै गएपछि घरगुजारा केले टार्ने होला रु” लामो खडे रीले तरकारी बाली बोटमै सुक्न थालेपछि किसानको पि’रोलो बढे को हो ।यसपालि सिङ्गो हिउँद पानी नपरी बित्यो ।
“चैतमध्य सकिँ”दासम्म पानी नपर्दा वैशाखी तर”कारीका बोट र लहरा सुक्दै गएका छन् । यो वर्ष तरकारी खेतीका लागि एकपछि अर्को प्रतिकूलताले मन भाँचेको किसानको ठम्याइ छ । “नयाँ वर्ष सँगै लकडाउनको मार पर्यो, फलेका त’रकारी बजार लान न’पाएर बोटमै बुढियो!
“सोही बस्तीका अर्का किसान गङ्गाराम महतोले दिक्दा रिँदै भन्नुभयो, “गत वर्षको वैशाखी र बर्खे तरकारी बाली बोटमै बुढियो, अहिले वैशाखी ९गृष्मकालीन० तरकारी बाली पानीबेगर सुक्न थाल्यो ।” जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका भङ्गाहा, बर्दिवास, औरही र गौशाला नगरपालि का क्षेत्र तरकारी बालीका लागि उर्बर ठाउँ मानिन्छन् ।
“त्यसैगरी मटिहानी नगरपालिकाका ढेकाहा, वर्दाहा, आवर र बलवा नगरपालिकाका धमौरा, रौजा बस्ती तरकारी उत्पादनमा उर्बर क्षेत्र मानिन्छन् । मुख्य बाली नै तरकारीलाई बनाएका किसान पानीको उपाय नहुँदा अहिले विरक्तिएका हुन् ।
“बस्ती नजिकै जता हेर्यो, खोलाखोल्सी छन्”, बर्दिवास–९ पशुपतिनगरका किसान महेन्द्रसिंह कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “तर खोलाखोल्सी सिंचाइ का लागि नभएर बर्खे भेलमा खेतबारी बगाएर चिन्ता थप्नेमात्र छन् ।” गत वर्षामा रातु नदीको बाढीले बगर बनाएको खेत देखाउँदै महतोले भन्नुभयो, “खै हाम्रो त कर्मै खोटो पो हो कि क्याहो ।”
“स्थायी सिँचाइको कुनै व्यवस्था नभएको र अहिलेको लामो खडेरीले बस्तीका इनार धमा धम सुकेपछि पम्पसेट ९ इनारबाट पानी तान्ने मोटर०को काम पनि सकि”एको महतोको भनाइ छ ।स्थायी सिँचाइको प्रबन्ध हुन नसकेको र इनार, चापाकल धमाधम सुकेपछि किसान तरकारीका बोट सुकेको आँखाभरि आँसु टिल्पिल्याउँदै हेरिरहन बाध्य छन् ।
“यसपालि लामो हिउँद पानी नपरी बितेपछि पानीका स्रोतका मुहान सुक्दै जाँदा आफूहरु बिलखबन्दमा परे को किसानको दुखेसो छ । जिल्लामा मौसमी÷बेमौस मी र वर्षभरिका विभिन्न याममा गरी १० हजार हेक्टरमा तरकारी खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीले जनाएको छ ।
“महोत्तरी जिल्लाको कूल खेतीयोग्य जग्गा ६७ हजार ३५२ हेक्टरमध्ये हालसम्म मुस्किलले करिब सात हजार हेक्टर मा मात्र कुलो लाग्ने सिँचाइ सुविधा छ । यसपालिको लामो हिउँदे खडेरीले सिञ्चित जग्गाकै पानीको स्रोतका मुहान समेत सुक्दै गएकाले अहि””लेको बाली”मात्र नभएर अब लगाइने बालीका लागि खनजोत गर्नसमेत समस्या परेको किसान बताउँछन् ।
“किसानको यो चिन्ताबीच प्रदेश–२ सरकार को भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सिँचाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ । यसैगरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकाले सिँचाइ सुविधा विस्तारकै लागि १०० भन्दा बढी इनार निर्माण भइसकेका र यस वर्ष पनि इनार निर्माणको काम भइरहेको जनाएका छन् ।
“यसैबीच मटिहानी नगरपालिकाले पनि सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि बोरिङ जडानको काम थालिएको जना एको छ । उनले भनेकी छन ,ुषडयन्त्र, तिगडम र छलछा मको राजनीति, पार्टी एकता देखि एकता भंगसम्म आयो । यि सबै नक्कली र निश्चित स्वार्थका लागि थिए।
“फेरी जसले पार्टी बनायो उसैलाई कारबाही रु साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो स्वीकार्य छैन। कसैको बुई चढेर जे गरिँदैछ त्यो गलत गरिँदैछ। हेक्का राखौं( बुई चढ्ने लड्छ । र ष’डयन्त्र, तिगडम र छलछामको राजनीतिक आयु छोटो हुन्छ।ु